Iyo nzira refu yekumba, iyo nyaya yehupenyu inoratidzirwa nekutambura | Zvazvino Zvinyorwa
En Iyo nzira refu yekumba (1998), musikana anoona mhirizhonga nekushungurudzwa munzvimbo pakutanga yaida kumupa pekugara uye chengetedzo, anoita kunge acharasikirwa nezvose ... asi chimwe chinhu chichachinja. Ndiwo mavambo enhoroondo ino nemunyori weAmerica Danielle Steel. Chinyorwa chinofumura nyaya yaGabrielle, musikana ane hupenyu hwakaonekwa nekutambura.
Nekuda kwezviri pamusoro, pfungwa yemhuri neimba inowana chirevo chakasiyana zvakanyanya kubva kune icho chetsika tsika. Kunyangwe paine humbowo hwakasimba hweiye mudiki protagonist, bhuku iri rakakunda moyo yemamirioni evaverengi. Uye ndeyekuti kupinda mune ino nyaya kunosanganisira matambudziko nekusaruramisira, zvisinei, iyo nyaya inoratidzawo maitiro ekukunda mamiriro akashata akadaro.
1 Pfupiso yeiyo Iyo Yakareba Nzira Kumba
1.2 Iyo nzira refu
2.1 Maitiro ekurondedzera
2.2 Zvakawanda kupfuura inoverengeka nezve kushungurudzwa kwevana
3 Nezve munyori, Danielle Steel
3.1 Hupenyu hwakaoma hwemunyori
3.2 Hupenyu hwakabatana nekunyora
3.3 Inosuruvarisa hudiki semusoro wepakati
3.4 Mamwe emabhuku aGabrielle Steel anotengesa zvakanyanya
Pfupiso ye Iyo nzira refu yekumba
Sezvakataurwa mundima dzapfuura, iyo novel inotenderera neshungu yemusikana akakuvadzwa mumuviri uye nepfungwa. Kune zvimwe inri, musikana ane makore matatu anozvinzwisisa seane mhosva yekushungurudzwa, nekuti amai vake vane chisimba vanodaro. Vatarisana neizvi, baba - pamwe nekuda kwekusava nehanya kana kutya - havakwanise kumisa kusarongeka kunaGabriele.
Neiyi nzira, nekushungurudzwa, kurohwa uye kutukwa marongero ezuva iri, hunhu hunoshungurudza zvechokwadi hunovhurika. Mukukura kwemusikana, hukasha hwepanyama, hwekutaura uye hwepfungwa hunowedzerawo. Kusvika padanho rekuti, Mushure mekupa musikana uyu kurova zvinouraya, amai vacho vanoita sarudzo yekusiya Gabrielle mumusha wemamongi. Kwete ndisina kutanga wavimbisa "ndinodzoka."
Iyo nzira refu yekumba ...
Iyo nzira refu
Kunzvimbo yemasisita, musikana anozoziva rudo uye kurapwa kwakanaka, izvo zvisati zvamboitika kwaari. Atova mumakore ake ekuyaruka, Gabrielle anodanana nemupristi mudiki kwazvo, nekudaro achiona rudo rwake rwekutanga kumurume. Nehurombo, mufundisi anofa, nekudaro nhamo inorova moyo wemusikana ane nhamo.
Panguva ino, musikana anoratidza kutsunga kunorumbidzwa kwekusakundwa nekuora moyo kana kutakurwa nechishuwo. Kunyangwe zvese kurasikirwa kunorwadza, protagonist inokwanisa kupodza maronda ake uye kuenda kumberi. Chekupedzisira, Gabrielle anosarudza kusiya imba yemamongi kuti awane rusununguko kubva kunze kwenyika ... uko kusuwa kuri kushaikwa, asi atoziva maitiro ekugadzirisa nazvo.
Zvinyorwa zvaDanielle Steel zvinogona kusiyaniswa nekudzika kwepfungwa kweavo mavara (Iyi nhoroondo inotaurwa mumunhu wechitatu haina kusara). Kunyangwe iyo New Yorker yakaverengerwa semunyori werose novels, Iyo nzira refu yekumba haina hukama neuyo musoro wenyaya. Pane zvinopesana, kusvibiswa ndiko kunonyanya kunzwa mune zvakawanda zvekusimudzira.
Nekudaro, iyo yakajeka tsananguro yeese epanyama uye emanzwiro ekurwadziwa anonzwa nemudiki protagonist inotyisa kune muoni. Izvo hazvina chikonzero chekuwedzeredza pachirongwa, kunyangwe hazvo mutambi wechidiki ari mudiki sei. Zvimwechetezvo, kuburikidza nezwi remutauri ari kure, muverengi anocherekedza nharaunda yaGabrielle ine hukasha pamwe nekumwe kureurura uye kwehukama.
Zvakawanda kupfuura inoverengeka nezve kushungurudzwa kwevana
Chiitiko chekugamuchira chinokanganisa zvakanyanya: musikana ane makore matatu -kushungurudzwa naamai vake. Mukadzi ane kuomarara (kusazvipira?) Kwababa vasingakwanise kuita basa ravo sedziviriro yemhuri. Kunyangwe ichi "chinogamuchirwa" chinovhiringidza, munyori zvishoma nezvishoma anokwanisa kuburitsa kumwe kunzwika.
Nenzira iyi, Simbi inoenda kubva pamusuwo wakasindimara wekumutsa manzwiro etariro, kunyangwe pakati penhamo. (Imomo mune nhema isingarambike inogadzirwa muvanhu). Zvadaro, ndima dzinowoneka nezvimwe zvinyoro nyoro, nepo Kutsiga kwaGabrielle uye simba remukati zvinoonekwa. Neichi chikonzero, vaverengi vanogara kusvika peji rekupedzisira kuti vazive kwavari kuenda.
Nezve munyori, Danielle Steel
Musi waAugust 14, 1947, iyezvino munyori Danielle Steel akaberekerwa muNew York City, anozivikanwa nekuda kwenoverengeka emanovel ake. Saizvozvo, Ndiye mumwe wevanonyanya kuverengerwa muUnited States uye akwezva tsitsi dzevaverengi vake.. Uye izvi hazvishamise, vateereri vanobatana nyore nyore nenhoroondo dzavo vane vatambi vanoramba varipo mukutarisana nezviitiko zvakaomesesa.
Hupenyu hwakaoma hwemunyori
Danielle Steel's biography haisi chaiyo "mubhedha wemaruva." Kuburikidza nezviitiko zvavo, mavambo emazwi avo anogona kunzwisiswa neimwe nzira. Kunze kwenyaya, nyanzvi yeNew York yakanyorawo nhetembo uye mamwe mabhuku asiri enhema. Pamusoro pezvo, muna 2003 akavhura gallery kuti atsigire vechidiki varikubuda maartist.
Saizvozvowo, Simbi yakave nehupenyu chaihwo, hwakatarwa nezvipingaidzo padanho remumwe wake uye mhuri (asiya michato mishanu kumashure). Nekudaro, akakwanisa kukunda zvipingamupinyi zvese, zvirokwazvo, akatora mukana wekugadzira nekutengesa wezviitiko izvi kuburikidza nekunyora. Pari zvino, munyori weAmerica ane mukurumbira wekunyora Padanho repasirese nepasi rose.
Hupenyu hwakabatana nekunyora
Danielle Steel akatanga kunyora kubva pazera diki kwazvo; Akatova mumakore ake ekuyaruka aive nemanyoro enhetembo (akaburitswa makumi emakore gare gare). Gare gare -Ane makore gumi nemasere-- akapedza bhuku rake rekutanga, kunyangwe, yakafanana nenhetembo yake, akaiburitsa mushure memakore mazhinji.
Kupfuuridza nguva, Simbi yakakwanisa kutsikisa anodarika makumi masere emabhuku, mamwe aine marekodhi ekutengesa kana nzvimbo dzekutanga dze vanotengesa zvakanyanya. Sokunge izvo zvaive zvisina kukwana, Casa del Libro anoiongorora semunyori anoverengwa zvakanyanya pasi rese, aine anopfuura mamirioni mazana masere emakopi akatengeswa. Pamwe chete neizvi, iye anozivikanwa semusiki ane hunyanzvi uye wepakutanga; Ngano (800) ndiro bhuku razvino kwazvo.
Inosuruvarisa hudiki semusoro wepakati
Kunge protagonist ye Iyo nzira refu yekumba, Danielle Steel akatambura zviitiko zvinorwadza pahudiki hwake. Naizvozvo, hudiki hwakamiririra hupenyu hukuru uye dingindira rekunyora kwaari, kunyanya mushure mekurasikirwa nemwanakomana (Nicholas). Akatambura nekunetseka kwepfungwa kusvikira azviuraya muna 1997. Mukumuka kwerufu rwemwanakomana wake, Simbi akatumira Chiedza chako chemukati.
Yakabudiswa muna Gumiguru 1998, Chiedza chake chakajeka -muChirungu- rave riri rimwe remazita ake nekubudirira kukuru kwekugadzirisa. Gore rimwe chetero, Simbi yakatanga Iyo nzira refu yekumba (May) uye The clone (Chikunguru). Zvino aya maviri ekupedzisira magwaro akawanikwa kuita bhizinesi kwakanaka, asi isingaenzaniswi nechinhu chakanyanya kutengesa chakachengetwa nemabhuku anotevera:
Mamwe emabhuku aGabrielle Steel anotengesa zvakanyanya
Mharidzo yaNam (Meseji kubva kuna Nam, 1990)
Zvishongo (zvishongo, 1992)
Chipo (Chipo 1994)
Kukudzwa kwekunyarara (Chinyararire Rukudzo, 1996)
Chiteshi chengarava chakachengeteka (Nzvimbo Yakachengeteka, 2003)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Iyo nzira refu yekumba